HeersareMuxumed: Safarkii xiisaha badnaa!
Safarkii xiisaha badnaa!
Wuxuu ahaa safar guure, dheelmasho, galab-carrow iyo kallahaad inta ba isku darsaday. Waxa aan ka baqoolay magaalada Hargeysa aniga oo u sii jeeday meel aan muddooyinkaa ba rabay in aan tago. Waxa aan sii xawaareeyaba gaadhay bartii aan beegsanayay.
Safarka cid igu wehelisanay may jirin aan ka ahayn ismaaweelin. Waxa aan meexaano ka dhiganayay baraamij muuqaal ahaan loo qabtay, balse aan dhegaysi u rogay oo dhawaan ay weriye Nimco Samriye ka qabatay abwaan Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi). Wuxuu ahaa wehel ii buuxiyey kaalintii aan tebayay ee ahayd qof ila socon lahaa. Waxa aan isku tiriyaa dadka abwaan Hadraawi sida gaarka ah ugu xidhan kana shidaal-qaata maansooyinkiisa kala duwan ee ku saabsan badweynta nolosha. Wuxuu yahay barnaamij si gaar ah diiradda loogu saaray abwaan Hadraawi iyo jacaylka, maansooyinkiisa kala duwan ee uu ka tiriyey waayihii jacaylka ee uu soo maray iyo kuwii uu goob-joogga ka ahaa. Waxa ku duugan taariikh, maaweelo, xog iyo xiiso aan laga go'ayn. Waxaana aan ka mid ahaa dadkii talada ka gaystay markii barnaamijkaa la qabanayay.
Intii aan dhexda sii socday waxa aan si feejigan isha ula raacayay deegaanka oo meelo kala duwan oo ka mid ahi ka soo doogeen abaar daran oo hore ugu dhufatay, halka meelaha qaar weli ay ka sii muuqato raadkii iyo omoskii abaartu.
Waxa aan ku safrayey waddada laamiga ah ee isku xidha Hargeysa iyo magaalooyinka bariga ka xiga. Abbaartaydu waxay ahayd Burco. Saacado ka dib ayaan magaalada Burco gaadhay aniga oo dhawr jeer dhexda ku sii hakaday. Markii aan nastay meelo kala duwan oo magaalada ka mid ah ayaan booqday.
Burco markii aan cabbaar ah dhex qaaday, waxa aan dareemay in sidii ay xaamiga u ahaan jirtay in aanay hadda u ahayn: “Burco waxa hadda ka jira xaalado kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo la'aan baahdan, dhaqdhaqaaq ganacsigu wuu liitaa, sixir barar wuu jiraa, qiimaha sarrifka doollarku meel sare ayuu nagu marayaa oo tayadii lacagta Somaliland way hoosaysaa. Waxa kale oo weli taagan dhibaatadii tahriibka. Nolosha dadku waa isku jir. Dadku'se wax badan ayay tebayaan.” Ayuu yidhi Maxamed Muuse oo deggan magaalada Burco.
Meelaha aan sida gaarka u danaynayay in aan booqdo waxa ka mid ahayd jaamacadda Burco siiba kulliyada barashada caafimaadka xoolaha. Hormoodka kulliyada Xamse Jibriil Ibraahim ayaa ii sheegay in habsami-u-socodka waxbarasho ee kulliyaddu uu si hufan u socdo. Wuxuu ii kaxeeyey halka uu jaamacadda kaga nool yahay dameerka ay kulliyad ahaan qalliinkiisa doorka weyn ka qaateen oo lagu dhex xannaaneedo Jaamacadda, oo Xamse tilmaamay inay mar kasta la socdaan caafimaadkiisa isla markaana uu hadda wanaagsan yahay. Dameerkaas oo xaaladdiisa dayacnayd oo hore uu ummada ugu soo bandhigay weriye Cabidmaalik Muuse Coldoon.
Markii aan ka soo laabanayay magaalada Burco oo aan maalmo kooban ku sugnaa, waxa farxad ii ahayd in aanan sidii hore safar-kelinnimo ah soo gelin. Waxa baaburka aan ku safrayey igu wehelinaysay xaaskayga oo Burco iiga sii horraysay. Intii aanu dhexda soo soconnay waxa aanu fursad u helnay in aanu bilicda deegaanka ka boganno.
Inta u dhexaysa Burco iyo Sheekh waxa jira meelo tigaad fiicani ku taallo isla markaana ay xareeddu fadhigo. Safarkaa dheer iyo Hargeysa iyo Burco aanu isaga kala gooshna waa meesha deegaanka Sheekh waa meesha keliya ee aanu dareennay in raxmaadka roobku maasheeyey, walaw aanaan laamiga ka degin.
Safarkaasi xiisaha gaarka ah ee uu ii lahaa waxa ka midaa, dhammaan safaraddii aan hore ugu tegi jiray Burco waxa aan ka mid ahaan jiray wefti oo baabuur la wado ayaan saarnaan jiray, ama cidda aanu is raacno ayaa gaadhiga kaxayn jirtay. Hasayeeshee doorkan aniga ayaa isku tashaday. Dawgasha Sheekh-na waxay ahayd markii iigu horraysay ee gaadhi aan wado aan ku maro.
Dad badan ayaa ka cabsada inay dawga baabuur mariyaan. Waxaana sababaha ugu weyn lagu macneeya leex-leexadka waddada, haadaamaha dhaadheer ee qofku dulmarayo, feejignaanta iyo kaantaroolka faraha badan ee qofka looga baahan yahay. Dadka qaar oo ku dawakha meeraysiga waddadda dawga dhex maraysa.
Marka dawga la soo dhaafo ee xagga Berbera loo soo socdo waxa aad kuu soo jiidanaya quruxda buuraha oo midabbo kala duwan isugu dhafan. Waxa aad arkaysaa buur istambar ah, mid sibidh ah, mid kale oo aad mooddo rinji la diyaariyey. Waa khayraadka dabiiciga ah ee ilaahay dhulkeenna ku mannaystay. Inta aad dhex marayso waxa aad ka fikiraysaa sidaa looga faa'idaysan karaa, maxaa looga faa'idaysan waayay, hawl intee leeg ayay u baahan yihiin adeegsiga khayraadkan diyaarsan? Iyo dareenno kale.
Inkasta oo qoraalkani ahaa mid aan si kor-ka-xaadis ah ugaga hadlayay safarkaa aan dhawaan ku tegay magaalada Burco, haddana waxaan uga dan lahaa in ay mararka qaar muhiim tahay in safarradu marka uu qofku galo inuu wax badan kala soconayo xaaladda deegaanka uu ku nool yahay, ta dad iyo duunyo ba.
Posted by HeersareMuxumed at 6:43 AM